Windows တွင် မြန်မာဘာသာ ပါဝင်လာရန် သင့်လက်မှတ& — MYSTERY ZILLION
Windows တွင် မြန်မာဘာသာ ပါဝင်လာရန် သင့်လက်မှတ&
March 2010 edited March 2010 in Tech News
Microsoft Corporation တွင် вЂလူဦးရေ ၅ သိန်းကျော်က အသုံးပြုသော ကမ္ဘာ့ ဘာသာစကား အားလုံးကို Microsoft Windows တွင် ထည့်သွင်းပေးရမည်вЂ™ ဆိုသည့် official policy ရှိပါသည်။ သို့သော် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မြန်မာဘာသာမှာ မပါဝင်နိုင်သေးဘဲ ရှိနေဆဲဖြစ်ရာ၊ ယခု ကျွနု်ပ်တို့ အားလုံးမှ စုပေါင်း၍ မိုက်ခရိုဆော့ ကော်ပိုရေးရှင်းသို့ စာဖြင့် ထိရောက်အောင် မြန်မာ (ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း) ဘာသာ အသုံးပြုသူများ အားလုံးကိုယ်စား တောင်းဆိုမည့် အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။ :rolleyes:
လက်မှတ် ရေးထိုးသူ အသင့်အတင့် များလာပြီဆိုလျှင်၊ ဤတောင်းဆိုချက် အပြည့်အစုံကို စာရွက်ပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ပြီး၊ ဘီလ်ဂိတ်နှင့် စတီး ဘော်လ်မာ တို့ထံ ပေးပို့ပါမည်။ မိုက်ခရိုဆော့တွင် အလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာ ပညာရှင်များမှလည်း ဝိုင်းဝန်းကူညီကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိနာမည်အပြင်၊ မိမိ ကိုယ်တိုင် ဖြည့်စွက်ပြောဆိုလိုသည်များကိုလည်း အောက်တွင် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) ဖြည့်စွက် ရေးသားနိုင်ပါသည်။
If you want to sign, visit the official website.
If Myanmar Language playapart in Widow,what things we can do more in window.
I means just want to know about Computing Terms in Myanmar.
We should alse transform some of the common terms in Myanmar.Be prepare For the best knowledge.
တွေးမြင်ရှူကြည့် အမှန်မြင်ကာ ပေါ့ပါး၏
အပြုံးနဲ ့အမုန်းအတွက် မင်းသုံးပေါ့
ပျော်ပျောက်နေခဲ ့တဲ ့ငါတို ့ကမ္ဘာ